ခိုးစားသူများ – Grab Love Story
ကျွန်တော့် နာမည် မင်းနောင်ပါ ကျွန်တော်ကဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ ကျွန်တော့် ဘဝက အခုချိန်မှာ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ ဘာလို့ဆို အခုခင်ဗျားကြည့်လေ ကျွန်တော့်မှာ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဂုဏ်လည်းရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်တိုက်တွေ တိုက်ခန်းတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရှိတယ် မိန်းမလည်းရှိတယ် နိုင်ငံခြားမှာ ပါရဂူ ဒီဂရီဘွဲ့တွေဆက်တက်ဖို့လည်းရှိတယ် …..ဆရာဝန်အပေါင်းအသင်းတွေ ၊ မိန်းမရဲ့ ဂုဏ်သရေရှိမိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိတယ် ကဲဘာလိုသေးလဲဗျာ သည်ကြားထဲ အငယ်မယားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျ …..ဟဲဟဲ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ ဘဝကိုကျေနပ်တယ်ဗျ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော် သည်အခြေအနေရောက်အောင် ဟိုးအရင်ကတည်းက အိပ်မက်မက်ခဲ့ရတာကြာပါပြီ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ဘဝကဘယ်လောက်ခက်ခဲခဲ့လည်းဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူး သည်အခြေအနေရောက်အောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်း ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး တကယ်တော့ လူ့ဘဝဆိုတာ မာယာများတဲ့ကစားပွဲတစ်ခုကို လူတွေအများကြီးနဲ့ကစား နေကြရတာပါ သည်လို ကစားပွဲကြီးမှာ ကိုယ်ဘက်က လည်မှသာ ကိုယ့်ဘက်ကမနုံမှသာ နိုင်ပွဲတွေရနိုင်မှာဗျ နို့မို့ကိုယ်ချနင်းသွားကြလ်ိမ့်မယ် သည့်အတွက် ဘယ်သူမှခင်ဗျားကိုသနားနေမှာမဟုတ်သလို ဘယ်သူမှလည်း အားပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဗျ အားလုံးကသူ့ဘဝနဲ့သူပဲလေသည်သဘောပေါ့ဗျာ ကျွန်တော့်ဘဝက သုညဘဝကနေဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာ အခုသည်အခြေအနေမှာတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတာတွေတစ်စတစ်စအကောင်အထည် ပေါ်နေပါပြီ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အမေကပဲဆယ်တန်းအထိ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာကျွေးခဲ့တာဗျ။
အမေကကုန်စိမ်းရောင်းတယ်လေ သူ့တစ်ဦးတည်းသောသားကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်အရမ်းဖြစ်စေချင်တဲ့အမေက အခုကျွန်တော် ဆရာဝန်ဖြစ်တော့ မရှိတော့ပါဘူး ဝမ်းနည်းမိသားဗျာ အဖေလားအဖေအကြောင်းကတော့ မပြောချင်လောက် အောင်ပါပဲဗျာ အဖေက ဖခင်တာဝန် အိမ်ထောင်မူ့တာ ဝန်မကျေခဲ့ဖူးလို့ပြောရမယ် ဘယ်တုန်းကမှကောင်းကျိုးမပေးခဲ့ဖူးဆိုပါတော့ ပြောရတာတော့ငရဲကြီးပါတယ်ဗျာ သူက မိန်းမကိစ္စရယ် အရက်ရယ်ပဲသိတာဗျ ဘာအလုပ်မှမယ်မယ်ရရသာသာမရှိတာ အမေ့ကိုဆို အရက်ဖိုး တောင်းလိုက်မရရင်နှိပ်စက်လိုက် ကျွန်တော့်ကို ကန်ကျောက်လိုက်နဲ့နေတာဗျ တကယ့်လူဆိုးကြီးပါဗျာ သူ့ဆိုးဒဏ်တွေကို အမေရောကျွန်တော်ရော ခါးစည်းခံခဲ့ရတာဗျ ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာတော့ အမေက ကျွန်တော်ရောသူ့ကိုရောထားသွားပါလေရော အားကိုးရာတစ်ခုတည်းသောနေမင်းကြီး အမှောင် ကျသွားတော့ ကျွန်တော့်ဘဝကူရာကယ်ရာမဲ့ အမှောင်ထဲလမ်းပျောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ အဖေက အားကိုးမရတဲ့အပြင် အချိန်ပြည့် မူးရူးနေလို့ ထမင်းစားဖို့အပြင် သူ့အရက်ဖိုးအတွက်ပါ ဈေးထွက်ရောင်းရင်းရှာရတာပေါ့ဗျာ ဆယ်တန်းမှာအမှတ်ကောင်းလို့အချို့တွေကနှမြော ကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ မကူညီကြပါဘူးဗျာ ဆွေမျိုးဆိုတာကလည်းအမေရှိတုန်းကတောင်မလာတာ အခုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ ၊ အဖေကတော့ပြောပါတယ် ကျောင်းစာထက် နေ့စဉ်ထမင်းစားဖို့ အလုပ်ပဲလုပ်တဲ့ သူပါးစပ်ကသည်စကားထွက်တာအံ့သြစရာမရှိပါဘူး သည်တော့ ကျွန်တော်လည်းအိမ်ဘေးက သီဟတို့ညီအစ်ကိုတွေနဲ့ မြို့ထဲက ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ဘူတာတွေမှာဆေးလိပ်တို့ဘေထုပ်တို့ရောင်းခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ ပန်းရံတို့လက်သမားတို့ ဝရိန်ဆောတာတို့လည်း အရင်ကလုပ်ပါတယ် မမြဲပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်က အပင်ပန်းမခံနိုင်တာရယ် ပို်က်ဆံအရနည်းတာရယ်ကြောင့် အလုပ်တွေပြောင်းခဲ့တာဗျ နောက်ဆုံးသီဟနဲ့ မနက်ဘက် သွင်ရုံနားမှာ ကွမ်းယာလည်ရောင်းတယ် ညဘက်မြို့ထဲ ပြောင်းဖူးပြုတ် မုန့်ဖတ်ထုပ်ရောင်းတယ် အစကဘာမှမသိသေးတော့သီဟနောက်လိုက်ပြီး သင်ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းကျွမ်းသွားတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲရောင်းဖြစ်တော့ပါတယ်။
သည်တော့ ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းပေ မယ့်လည်း အဖေ့ကိုအရက်ဖိုးရှာပေးနိုင်ခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်းထမင်းစားရတာ အဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ အဖေကတော့ အရက်ကိုမနက်နဲ့ည အသောက်မပြက်တော့ဘူး တော်တော်သောက်နေပြီပေါ့ဗျာ အဖေဆိုတော့တာလည်းမရ ပြောပြန်ရင်လည်းအဆဲခံရတော့ တားဖို့နေနေသာသာဘာမှကိုပြောမနေတော့ဘူး သည်လိုနဲ့ နှစ်နှစ်လောက်တက္ကသိုလ်မတက်ဘဲ ဝမ်းရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေရတော့ အလုပ်ထဲကနယ်ပယ်စုံ အလွှာစုံကလူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့ ဈေးရောင်းတဲ့သူဆိုတာပိုဆိုးတာက နယ်ပယ်မျိုးစုံကလူမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံနေရတာလေ ကို့ယ့်ဖောက်သည်ထဲ အရက်သမား၊ ဆေးသမား၊ ဖဲသမားတွေပါနိုင်သလို အလုပ်သမား ၊ ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဖာသည်ရဲ ၊ စပယ်ရာ ၊ ကျောင်သားစသဖြင့်လူမျိုးစုံ အလွှာစုံ ၊ ရာထူးအဆင့်တန်းမျိုးစုံပါတာပေါ့ အားလုံးကိုတော့တန်းတူဆက်ဆံရတာပေါ့ သည်ထဲမှာ ခေါင်းတွေတော်တော်များများ နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့သလို ပြည့်တန်ဆာမတော်တော်များများနဲ့လည်း ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့ တစ်နေ့ ကျွန်တော်ကွမ်းယာဆိုင်ညဘက်သိမ်းခါနီး ကိုကျော်ထက်ရောက်လာတယ် ကိုကျော်ထက်က ခေါင်းဗျ သူကကျွန်တော့်ကို ယောကျာ်းပြည့်တန်ဆာ လုပ်ဖို့လာပြောတာပါ အရင်ကလည်း နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လုပ်ဖူးပါတယ် ကာမဆန္ဒမပြည့်တဲ့ အန်တီမမတွေနဲ့နေပေးရတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းသည်လောကထဲစရောက်တုန်းက အစဆိုတော့ ကြောက်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေသွားပါတယ် လူပေါင်းစုံနဲ့ ပေါင်းနေတော့ မိန်းမကိစ္စတွေကသိနေတာကြာပြီ ဆိုပေမယ့်တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ခက်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချောတယ်လို့မခံယူပေ မယ့် ကျွန်တော့်နဲ့နေတဲ့ဘွားတော်တွေကတော့ သဘောကျကြတယ်ဗျ အပေါင်းသင်းတွေကလည်း သည်အလုပ်ကိုတစိုက်မက်မက်လုပ်ဖို့ပြောတယ် ကျွန်တော်လည်းသည်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကြာပါပြီ တရားမဝင်ဘူးဆိုပေမယ့်သည်အလုပ်က ပိုက်ဆံလည်းမြိုးမြိုးမြက်မြက်ရတယ်။
ကာမလည်းဆက်ဆံရတယ်ပေါ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောသလိုဆို ကုသိုလ်လည်းရလီးလဲဝပေါ့ ကျွန်တော်လည်းလိင်ကစ္စနဲ့ပက်သက်လို့ အဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆို ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေကအမေ့ကိုအားပါးတရလိုးတာတွေ ၊ အဖေမိန်းမပေါင်းစုံခေါ်လိုးခဲ့တာတွေမြင်ခဲ့ရတော့ သိနေပြီးသားပါ ကိုယ်တိုင်ကျ ကြုံရတာကတော့ ယောကျာ်းဖာသည်အဖြစ် ဗိုလ်ကတော်တစ်ဦးနဲ့ နေခဲ့ရတာပါ လူပျိုဘဝပန်းဦးသုတ်ကို အသက်၄၅ အရွယ်အန်တီကြီးရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲထည့်ပေးခဲ့ရတာက တော့အမှတ်တရပါပဲ နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုကျော်ထက် ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမူ့အရ သည်လုပ်ငန်းကို ဆက်တိုက် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေးပြည့်တန်ဆာထက်စာရင် ယောကျာ်းလေးပြည့်တန်ဆာကပိုရှားတယ်ဆိုတော့ လောကထဲကျွန်တော် နာမည်ရလာတာပေါ့ဗျာ ကွမ်းယာဆိုင်လေးဗန်းပြပြီးကျွန်တော်လည်း သည်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဝါသနာပါလာပါတယ်ူအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကြုံရတာက တစ်ခုလပ်မုဆိုးမကြီးတွေထက် လင်နဲ့ခဏဝေးနေတဲ့ သူတွေပဲဆိုတော့ အမြဲတမ်းဖောက်သည်ကတော့ မရှိသေးဖူးပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့လောကမှာခေါ်တဲ့စကားအရချိတ်မမိသေးဘူးပေါ့ ချိတ်ဆိုတာ စပွန်ဆာကို ခေါ်တာပါ အဘိုးကြီးတွေကောင်မလေးတွေကို စပွန်ဆာပေးသလို အန်တီမမတွေထဲ စပွန်ဆာပေးနိုင်တဲ့ဘွားတော်တွေကိုချိတ်လို့ခေါ်တာပါ ကျွန်တော်လည်း ချိတ်ကြီးတစ်ခုခုမှာမိပြီး ကျွန်တော့်ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့ကြံနေတာကြာပါပြီ ကိုယ်တွေ့လိုက်ရင် ကာမဆန္ဒဦးစားပေးတွေ ပဲဖြစ်နေသလို ရေရှည်ထက်ရေတိုသာယာတဲ့ဘွားတော် တွေပဲဆိုတော့ အဆင်မပြေသေးဖူးပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် အဲ့နေ့ကကိုကျော်ထက်ချိတ်ပေးတဲ့ တာမွေ ကျောက်မြောင်းတိုက် ၁၁က ဘွားတော်ဆီ ရောက်သွားခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော့်ဘဝ တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာ ….။
အန်တီဒေါ်သန်းဆင့်က အသက်၄၄နှစ်ရှိပြီဆိုပေမယ့် သုံးဆယ်ကျော်ပဲထင်ရအောင် အလှအပပြင်တက်ပုံနဲ့ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်တက်ပုံကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဗျ သူနဲ့က တစ်နေ့လုံးနေရတာပါ ဒေါ်သန်းဆင့်က ရင်သားတွေတင်သားတွေကလည်း တကယ့်ကို ယောကျာ်းတွေစွဲလန်းချင်စရာကြီးပါ သူကခေတ်ပညာလည်းတက်တော့ လိင်မူ့ကိစ္စမှာပွင့် လင်းတယ် သူလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော့်ကိုသေချာပြောပြတယ် သည်နေတော့ သူဖင်ကိုအလုပ်ခံချင်ကြောင်း၊နောက်နေ့ကျ ဒေါ်ဂီ ပဲလိုးခံချင်နေတာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်လည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းကြိုးစားပေးခဲ့တော့ သူနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ ဒေါ်သန်းဆင့်က မုဆိုးမ ကလေးသုံးယောက်အမေပါ သူ့သားသုံးယောက်လုံးကသြဇီမှာ ကျောင်းတက်နေတယ် သုံးယောက်လုံး ကျွန်တော့်ထက်အသက် ကြီးကြတယ်ဗျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုစုယုယတွေကို ဘွားတော်ကစွဲလန်းသွားတယ်ပြောရမှာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်နဲ့ခဏခဏတွေ့ခဏခဏလင်မယားလို နေခိုင်း ရာကနေ သူကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလာတယ် သူ့ကိုတစ်ခါကပြောပြဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝကိုသူအရမ်း သနားနေတာတစ်ကြောင်းကျွန်တော့်ကိုလည်းဒုက္ခတွင်းထဲကနေကယ်တင်ချင်နေတာတစ်ကြောင်းလည်း ပါတာပေါ့ သည်ကြားထဲလင်မယားအရသာကိုလည်းခံစားချင်တယ် သည်အလုပ်ဆက်လုပ်ပြီးဘဝဇာတ်သိမ်းမှာကိုလည်းမလိုလားဖူးပေါ့လေ နောက်ဆုံးကျွန်တော့်ကိုလည်းတကယ်ချစ်လို့ပါတဲ့ သည်တော့ ကျွန်တော်လည်းငြင်းနိုင်မလားဗျာ အခြေနေအကြောင်းကြောင့် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီထင်ထားတဲ့ အိပ်မက်လေးတွေအခု ပြန်ရှင်သန်လာတော့မှာဆိုတော့ သည်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ဖိ့်ုမဖြစ်နိုင်ဖူးလေ အဖေကလည်း ဆုံးသွားတာလွန်ခဲ့တဲ့လကပဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဘဝကတစ်ကောင်ကြွက်ပဲလေ သည်တော့ သူနဲ့အတူ အိမ်ထောင်ထူထောင်ဖို့သဘောတူညီလိုက်တယ်။
အချစ်ကပါခဲ့လားမပါခဲ့လားတော့ ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးပြုပြီးမမေးကြပါနဲ့ သူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက အရင်သူ့ယောကျာ်း ထက်ပိုတဲ့ကာမအရသာကို သူစိတ်တိုင်းကျကျွန်တော် ပေးခဲ့တယ် သူ့အချစ်တွေကိုလည်းလက်ခံပြီး ပြန်ချစ်ခဲ့တယ် သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ သူ့သားတွေကတော့ မကျေနပ်ကြပါဘူး သည်တောင်ပြန်မလာတော့ဖူး ပြောကြတယ် အန်တီနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူညီထားတဲ့ အတိုင်းကျွန်တော်ဆေးကျောင်းတက်ခဲ့တယ် ကလေးမယူကြဘူး၊ဒါ့အပြင် မိန်းကလေးတွေနဲ့မရှုပ်မပွေခဲ့ဖူး သူချုပ်ချယ်မူ့တွေအတိုင်းသူ့စိတ်တိုင်းကျနေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ သည်လိုနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေကို ရှေ့ဆက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ အခုဆို ဆရာဝန်ပေါက်စဘဝကနေ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ခဲ့ပြီပေါ့ အစက ဆေးရုံကြီးမှာ ထိုင်ခိုင်းပေမယ့် စိတ်မချလို့ရယ် ပင်ပန်းလို့ရယ်ဆိုပြီးရပ်ကွက်ထဲကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းပဲ အန်တီကဖွင့်ပေးခဲ့တာပေါ့ လူ့စိတ်ဆိုတာဆန်းကြယ်တယ်ဗျ ကျွန်တော်လည်း သည်လောက်သူချုပ်ချယ်နေတဲ့ကြားကနေ တစ်ခါတစ်ခါလွတ်ထွက်ချင်လာတယ်ဗျ သူကလည်း ပြောပါတယ် သူ့ကိုသစ္စာမဖောက်ပါနဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်ဖြစ်စေရမယ်ပေါ့ ဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ ဖောက်ပြန်ချင်တာဗျ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့် ခင်ဗျားနေ့တိုင်းကြက်သားဟင်းနဲ့ချည်းထမင်းစား ချင်နေမလားတစ်ခါတစ်လေ ငါးပိရည်လေးဘာ လေးပြောင်းစားချင်မှာပဲလေ ကျွန်တော်လည်းသည်လိုပဲပေါ့ဗျာ သူ့တစ် ယောက်ထဲနေ့တိုင်းလိုးလာရတာရိုးလာပြီဗျ အသစ်အဆန်းလေးမြည်းချင်လာတယ် ဒါ့ကြောင့်မို့လည်းသူမသိအောင်ခိုးစားတက်လာတယ်ပေါ့ ပေါင်းလာတာ ၁၀နှစ်ရှိလာပြီ ကျွန်တော်ကအသက်၃၀ သူက ၅၀ကျော်ပြီ အသက်သာ၅၀ကျော်တာ ဘွားတော်နေ့တိုင်းကျွန်တော့်လီးဝင်မှ အိပ်ပျော်တက်တာကျွန်တော်လည်းရခါစကတည်းက သူ ကျနပ်အောင်အသေလိုးပေးခဲ့တာပဲလေ ဘွားတော်က ဖင်တွေရင်တွေဆို အခုထိမကျသေးဖူး ပုံစံမျိုးစုံ တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးလည်းလိုးခဲ့ဖူးတယ်။
အခုချိန် မှာတော့ သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်အာသာမပြေတော့ဘူး ကျွန်တော်လည်းခိုးစားတက် လာပြီ ခိုးစားရတဲ့အရသာက ပိုကောင်းတယ်ဗျ အထူးသဖြင့်သူချုပ်ချယ်နေတဲ့ကြားကနေခိုးစား ရတာကပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ သည်လိုခိုးစားတာ ကိုသူမသိဖူးထင်နေလားသိတယ်ဗျ ကျွန်တော် ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးကတည်းကစောက်ချိုးပြောင်းလာ တာကိုသူသိတယ် ကျွန်တော်လည်းအပေါင်း အသင်းမကောင်းလို့ဆိုရမလားပဲ သိတယ်မလား အဲ့အချိန်ကဆရာဝန်ဆိုကုန်းချင်တဲ့သူကပေါမှပေါပဲလေ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေဆို လူကသာဆရာဝန် အနီးကပ်သွားပေါင်းကြည့်မှဖာခေါင်းသာသာတွေဗျ တကယ်ပြောတာသူတို့ဆရာဝန်အချင်းချင်းခိုးစားလိုက် စီနီယာဆရာဝန်မကြီးတွေနဲ့ခိုးစားလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး လူနာတွေနဲ့ပါခိုးစားကြလိုက်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဗျ ကျွန်တော်လည်းသည်လိုကောင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ခိုးစားတဲ့ လိုင်းထဲရောက်သွားတာပေါ့ အထူးသဖြင့် သူများရည်းစား သူများမိန်းမတွေခိုးစားရတဲ့အရသာကို နှစ်သက်သွားတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းအခုဆို အာရုံကြောဌာနကဆရာဝန်မကြီးတစ်ဗွေနဲ့ခိုးစားဖြစ်နေသလို ဆေးခန်းအမြဲလာတက်တဲ့ လူနာကိုတင်မြင့် မိန်းမနဲ့ပါစားနေပြီဗျ ဘွားတော်ကလည်း ကျွန်တော့်အရင်ကခိုးစားတာတွေ မိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပေမယ့်အပြစ်မပြောပါဘူး ဒါကြောင့်သူ့မျက်စိအောက်က ဆေးခန်းထိုင်ဖို့ပြောင်း လိုက်တာပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဝါသနာကိုမစွန့်လွတ်ပါဘူး ခိုးစားဖို့ဆိုရင် အိမ်ကအိမ်ဖော်အထိ ကြံတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ အိမ်ထောင်ရေးကလည်းယိုင်နဲ့နဲ့ပါ အခုဆိုကျွန်တော် လည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီ ရှေ့ဆက် အိပ်မက်ကမရှိတော့ဘူး ကျောင်းလည်းဆက်မတက် ချင်တော့ဖူး ကိုယ့်ပါသာအဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး ဆေးပညာနဲ့လုပ်စားလို့ရတယ် ဒါပေမယ့်ဘွားတော်ကျေးဇူးကိုမစော်ကားချင်တာကြောင့် သူ့ဘေးမှာနေပေးနေရတာပါ သည်လိုနဲ့ ကျွန်တော်ဖောက်ပြန်တာတွေလေးငါးခါမနည်းမိပြီးအချိန်မှာ သူနဲ့ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ပြသာနာတက်ကြရင်း ကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်ကွဲမယ်ဘာမယ်လုပ်လိုက်တော့သူ့ဘက်က လက်လျော့သွားတယ် နောက်ဆုံးကျွန်တော် နဲ့သူသဘောတူညီမူတစ်ခုရသွားတာက ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ပွဲတက်လင်ဖြစ်သလို ညတိုင်းလည်း သူ့စိတ်ကြိုက်နေပေးမယ် ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုနေနေ သူ့ဘက်ကမစွတ်ဖက်ယဖူးဆိုတာပဲဗျ…. ။
အဲ့သည်ကစလို့ကျွန်တော်လည်း အိမ်ကွင်းကန်လိုက်အဝေးကွင်းကန်လိုက်ကြားကွင်းကန်လိုက်ပေါ့ ဗျာ ဟဲဟဲ ဗျာ…. ကျွန်တော့်စွမ်းဆောင်ရည်လား ဟားဟား….ပြောပြပါ့မယ် ကျွန်တော်က ဆေးမကူရင်တောင်တစ်နေ့ကို လေးကြောင်းလောက် ရတယ်ဗျ တစ်ကြောင်းကို ၄၅မိနစ် လောက်ရတယ်ဆို ပေမယ့် တစ်ဖက်လူလုံးဝစိတ်မပျက်ရအောင် အချိန်ကိုဆွဲဆန့်ထားပေးလို့လည်းရတယ် ထန်ဖို့ ခက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် အရည်တရွှဲရွှဲနဲ့ လူးလှိမ့်နေအောင်မူတ်ပေးတက်သလို သားအိမ်ထိအောင်လိုးနိုင်တဲ့လီးရှည်ရှည်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဗျ နောက်ပြီးအပျိုတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ တာမကြာသေးတဲ့မိန်းမတွေနဲ့လည်း ကျွန်တော့်လီးက မဆန့်ဖူးဗျ တဏှာရည်ထန်ထန် အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ တွေကလေးအမေတွေမှလည်း ကျွန်တော်က အာသာပြေတာဗျ ခိုးစားလိုက်ရင်လည်း အကိတ်တွေ အန်တီမမတွေလောက်မှ စားသလို ကလေးအမေတွေဆို စွဲသွားအောင် သူတို့လင်နဲ့ပါမခံချင်အောင်လိုးပေးနိုင် တယ်ဗျ တကယ်ပြောတာ ဆရာဝန်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့စာထဲက အတိုင်းနိုင်ငံခြားကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ လီးကြီးရှည်ကြာဆေးတစ်မျိုးကိုလည်းကိုယ်နဲ့မကွာ အမြဲဆောင်ထားတော့ အေးဆေးပဲပေါ့ အသားအရည်ခပ်ပါးပါး မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့ ကျွန်တော်က သေးညက်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ကြီးမားတဲ့လီးတစ်ချောင်းပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဘုရားပေးတဲ့ဆုပါပဲ…. ကျွန်တော်အခုဆို ကျွန်တော့်ဆေးခန်းမှာ လိုတာခိုင်းဖို့ခေါ်ထားတဲ့ မထားကိုလည်း လိုးပေးနေတာကြာပြီဗျ မထားက ကျွန်တော့်ဆေးခန်းမှာ ဆေးရောင်း ဆေးခန်းဖွင့် ကျွန်တော့်ကူလုပ်ဖို့ အတွက်ခေါ်ထားတာဗျ တမင်သက်သက်အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမကိုခေါ်ထားတာက ဘာရှိရမလဲ စားဖို့ပေါဗျာ မထားနဲ့ ဆေးခန်းမှာအမြဲတမ်းတရင်းတနီးထိတွေ့နေရတော့ သိပ်ပြီးအားထုတ်စရာမလိုဘဲသိပ်လည်းမစည်းရုံးလိုက်ရပါဘူးညရှစ်နာရီဆေးခန်းပိတ်ခါနီး သူ့ကိုတုပ်ကွေးစစ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လူနာကုတင်ပေါ်တင်လိုးပေးလိုက်ရုံ ပဲပေါ့ဗျာ အစကတည်းက ကုန်းချင်နေတဲ့မထားကို လီးလှန်ပြပြီး နင့်ယောကျာ်းထက်ပိုကောင်းအောင်လိုးပေးမယ် လို့ပြောရင်းလိုးပေးလိုက်တာပေါ့။
မထားကလည်း အစကတည်းကကျွန်တော့်ကိုကြိုက်နေတော့ လီးပါမရှက်မရွံစုပ်ပေးတာတာကြည့် အဲ့နောက် ဆေးခန်းမှာလူပါးရင် အခန်းထဲခေါ်လိုးလိုက် အားရင်ဂွင်းထုခိုင်းလိုက်နဲ့ပေါ့ မထားကလည်း အသက်က၃၀ကျော်လုံးကြီးပေါက်လှဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းစားရတာအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ သူ့လင်က အရောင်းအဝယ်သမားဆိုတော့တစ်ခါတစ်လေ အိမ်မှာမရှိ တဲ့အခါမျိုးသွားသွားလိုးပေးရသေးတယ် နောက်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုအိမ်ခေါ်ကုနေတဲ့ လေသမားကိုတင်မြမိန်းမ မခင်စိန်ပါ ကိုတင်မြက လေဖြတ်ထားရတဲ့ကြားထဲကျန်းမာရေးက လည်း ချူချာတော့တစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့ နီးနီးနားနားကျွန်တော့်ကိုပင့်ရာကနေ အကြံသမားကျွန်တော်နဲ့မခင်စိန်နဲ့ ရင်းနှီးသွားတာပေါ့ မခင်စိန်က အသက်ကလေး ၃၀ကျော်မှာ လင်ဖြစ်သူကလေဖြတ်သွားတော့မုဆိုးမ ဘဝနဲ့မခြားမနားနေနေရတာဗျ ကြည့်လေ သွေးသားဆူဖြိုးနေတုန်း ကလေးသုံးယောက်အမေ မခင်စိန်ရဲ့ရင်သားကသူ့ကိုယ်လုံးသေးသေးလေးမှာ တော်တော်လေးကိုထင်ရှားတယ်ဗျ လူကမော်ဒယ်တွေလိုပိန်ပိန်ပါးပါးဆိုပေမယ့် ကလေး အငယ်လေးကမွေးထားတာတစ်နှစ်မပြည့်သေးတော့ နို့ တိုက်နေရတာကြောင့်လည်းနို့ကြီးကဆူထွက်နေပြီး သူဝတ်ထားတဲ့အကျီမှာ အမြဲနို့ကွက်ရာတွေတွေ့နေ ရတာကိုကစိတ်ထစရာဗျ ပြီးတော့တင်ပါး တင်ပါးကလည်း နောက်ကိုတမင်ပြစ်ထားသလားထင်ရအောင်ကောက်ချိတ်နေတာတကယ်ခင်ဗျားတို့ မြင်ရင်လိုးမိမလားပဲ တကယ်ကို မြင်တဲ့လူတက်လိုးချင်စရာကြီးပါဗျာ ကိုတင်မြနဲ့ကလေးသုံးယောက်ရပြီး အကြီးကောင် ၂တန်းအလက်မမူကြိုနဲ့အငယ်လေး၁နှစ်မပြည့်ခင် ကိုတင်မြလေဖြတ်သွားတော့ သူ့ခင်ဗျာ ငတ်နေတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမဖို့ကြံနေတာ ကြာပါပြီ အကြံသမား ကျွန်တော် သူ့ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အရင်ဆုံးမခင်စိန်နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတာပေါ့ မခင်စိန်က အိမ်မှာထမင်းခေါ်ကျွေးတဲ့အထိ ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတယ် သုံးရက်ခြားတစ်ခါ သူ့ယောကျာ်းကျန်းမာရေးစစ်ဖို့ဆိုပြီး သွားပေးရသလို ကြားထဲသူ့ကလေးတွေတစ်ခုခုဖြစ်မ လားဆိုပြီးအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာသွားပေးရတယ်ဗျ။
မခင်စိန်ကလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ ရိပ်စားမိတယ်ထင်တယ်ဗျ အဲ့လိုထင်အောင်လည်း မထိတထိတွေပြောတယ် သူနဲ့ပူးပူးကပ်ကပ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ် အသိသာဆုံးကကျွန်တော်ရှေ့မှာ ကလေးနို့တိုက်ပြရတာနဲ့ နုိ့တိုက်ရင်လည်း ကလေးမစို့တဲ့တစ်ဖက်ကိုအမြဲလှန်ထားတက်တယ်ဗျ ကလေးနို့တိုက်နေရင်းကျွန်တော်ကြည့်နေမှန်းသိလို့ နို့ကို ကလေးပါးစပ်ထဲကထုပ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်နေတက်သလိုတစ်ခါတစ်ခါနို့သက်တယ်ဆိုပြီး နို့တွေကို ညစ်ညစ်ပြီးခွက်ထဲထည့်တက်တယ်ဗျ ပြီးတော့ အိမ်ကိုခေါ်ထမင်းကျွေးပြီဆို ကိုယ်လုံး အလှပေါ်မဲ့အကျီတွေအမြဲဝတ်ထားပြီး အလှတွေပြင်ထားတက်တယ် ယောကျာ်းမိန်းမဗဟုသုတတွေမေးတက်တယ် သူနဲ့စငြိတဲ့နေ့ကိုပြောပြပါ့မယ် အဲ့နေ့က ကျွန်တော် သူ့အိမ်ကို သူ့လင်ကိုတင်မြဖျားတယ်ဆိုလို့ သွားပြီးဆေးထိုးပေးတာဗျ ကျွန်တော်လည်းကိုတင်မြကို ဆေးထိုးပေးပြီးသောက်ဆေးတွေပေးရင်းနဲ့အောက်ပြန်းဆင်းလာတော့မခင်စ်ိန်က သူကအကြီးကောင်နဲ့ အလက်မကို ကျောင်းကားပေါ်တင်ပေးရာကနေ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာတယ် အထဲရောက်လာတော့ ကျွန်တော်ကိုထမင်းစားသွားဆိုလို့ထမင်းစားကြတယ် ထမင်းစားပြီးတော့ မခင်စိန်က လမ်းကြောင်းဖော်တဲ့စကားတွေပြောတယ် ကိုတင်မြလည်း သေမယ်ဆိုသေသင့်ပါပြီဆရာရယ် အခုတော့လူကကလေးတစ်ဖက် စီးပွားရေး ကတစ်ဖက်နဲ့ကြားထဲသူ့ရောဂါကိုဆေးကုနေရသေးတယ် သြော်….ယောကျာ်းပဲဗျာ….အစ်မကလည်း…. ကိုယ့်ယောကျာ်းကိုပြုစုတာကုသိုလ်ပါဗျာ ယောကျာ်းသာဆိုတယ်အားမကိုးရပါဘူးဆရာရယ် ကျွန်မပိုက်ဆံရှိလို့သာ ဒင်းအခုလိုနေနို်င်နေတာပါ ကျန်းမာရေးကောင်းတုန်းကလည်း အရက်သမားပဲလေ အိမ်ထောင့်တာဝန်လင်တာဝန်ကျေခဲ့တာမှမဟုတ်တာ ပြောချင်တာက သူငတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ ကိုတင်မြက ကလေးသာသုံးယောက်ရတာ ထင်သလောက်မစွမ်း ဖူးသည်သဘောပြောချင်တာဗျ သြော်…..ဒါတော့လည်းဒါပေါ့ဗျာ…ဒါပေမယ့်သူက အစ်မကိုချစ်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်းဖောရှောပြောပေးရတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မခင်စိန်ကကျွန်တော့်စကားကိုပြန်မဖြေအားတော့ ဘဲ သူ့သမီးလေးကို သွားခေါ်ပြီးနို့လှန်တိုက်တယ်။
အခုကျွန်တော်တို့ထို်င်နေတာကအိမ်ရှေ့ဆက်တီ တွေပေါ်မှာပါ မခင်စိန်က ကျွန်တော်ဘေးကပ်ရက်ခုံကိုဝင်ထိုင်ပြီး ကလေးကမငိုပဲနဲ့နို့ကိုလှန်တိုက်တယ် ကလေးက နို့မဆာတော့နို့သီးကိုပါးစပ်ထဲက ပြန်ပြန်ထုတ်လိုက် အရသာခံလိုက်မစို့လိုက်နဲ့ လုပ်နေတယ် မခင်စိန် ကလေးကိုနို့တိုက်တာက ကျန်တစ်ဖက်နို့ ကိုသည်အတိုင်း ဖော်ထားတယ် ကျွန်တော့်နေရာမှာစဉ်းစားသာကြည့်ဗျာ လူက နဂိုကမှ သည်နေရာမှာအားသန်ပါတယ်ဆို ဘေးနားမှာ လာလုပ်နေတာကိုက ကြည့်တော့ သည်ကြားထဲမခင်စိန်က သူ့မာယာနဲ့ သမီး…ချိုချို… ..ချိုချိုစို့မယ်….သမီး……ချိုချိစို့မယ်…အေး…အေး… စို့….သမီးရေ….စို့နော် ……မစို့ရင်….ဦးဦးက လုစို့မှာတဲ့….စို့ပါကွယ်…….အံမယ်ကျွန်တော်နဲ့တောင်ကလေးကိုခြောက်လိုက်သေးတယ် သည်တော့ကျွန်တော်လည်း အူး..အူး…စို့မှာနော်…..စို့ပြီနော်….ကလေး..ရေ… စို့ပါကွယ်….အုးအူး…စို့ပြီ….အမယ်ရီတယ်….ရီတယ် ဘာလဲစို့ရမှာလား… ကလေးကအိပ်ချင်နေလုိ့လားမသိဘူးဗျ မစို့ဘူး ဒါနဲ့ကျွန်တော်က အစ်မကလေးကိုသွားသ်ိပ်လိုက်ပါဗျ ကလေးကအိပ်ချင်နေတာဗျ ပြီးတော့ အစ်မတို့အနေနဲ့ အခုလို ကလေးကို ဖြစ်သလိုနို့လှန်တိုက်လို့မရဖူးဗျ နို့စို့ အရွယ် ကလေးတွေနှာချေးချောင်းဆိုးဖြစ်ကြတာက မိခင်နို့ကြောင့်ပဲအရင်ဆုံးကလေးတွေနို့မတိုက်ခင် ရင်သားသန့်ရှင်းနေစေဖို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တယ် ရင်သားသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း သက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်သင့်တယ်ဗျ ကျွန်တော်က ဆေးပညာနဲ့ပေါင်းပြီးဖောလိုက်တာပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က အစ်မနို့ကို သေချာဆေးကြောသင့်တယ် အစ်မနို့ကို ကျွန်တော်ဆေးပေးရမလား ဆိုပြီးတည့်မေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကလေးကို နို့တိုက်ရာကနေကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်တယ် ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပေးလိုက်တော့သူက ဘာမှမပြောပဲခေါင်းညိတ်ပြတယ်။
ပြီးတော့ခေါင်းငုံ့သွားတယ် သည်လိုနဲ့ သူ့ကိုကျွန်တော်လည်းဘာမှဆက်မမေးတော့ပဲ အစ်မနို့တွေကတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် ကလေးနို့တိုက်တော့ ထွက်တာကြာသလိုပဲ ဒါလည်းစမ်သပ်ရမယ်ဗျ ကျွန်တော်ကအကြံနဲ့ပြောလိုက်တာပါ မခင်စိန်က ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့်ဂွင်ထဲဝင်လာတယ် ဟုတ် ဆရာ ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ သည်အတိုင်း နို့ကိုဆေးရမှာလား….. မဟုတ်ဖူးဗျ သူ့နည်းစနစ်တိုင်းလုပ်ရမှာ…. ဆရာလုပ်ပေးပါလား……လုပ်ပေးလို့ရတယ်မလား မခင်စိန်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ရမ္မက်ခိုးဝေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ပြန်ပြောပြီး ကျွန်တော် ထောင်တဲ့ထောင်ချောက်ကိုသိသိကြီးနဲ့ဝင်လာပါတယ် သူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော့်ဘက်ယိမ်းချင်နေပါပြီလေ မခင်စိန်က ကလေးကိုပုခက်ထဲသွားပြန်သိပ်ခိုင်းပြီး ရေတစ်ပုံးနဲ့အဝတ်ဖြူတစ်ခုယူလာခိုင်းလိုက် တယ် ပြီးတော့အနားမှာထိုင်ခိုင်းရင်း သူ့ကိုအကျီလှန်တင်ခိုင်းလိုက်တယ် မခင်စိန်ပြုံးစိစိလုပ်နေလို့သူ့ကြည့်မိတော့ နှစ်ယောက်သားရယ်မိသေးတယ်ဗျ ဟာ…အစ်မမရယ်နဲ့လေ တကယ်အကျီင်္လှန်ပေးလေ အပေါ်လည်ပင်းနားအထိ လှန်တင်ထားပေးနော်…. အေးပါ…မောင်လေးရယ် ….ခ်ခ်… သူလည်းရင်ခုန်နေမှာပါပဲ ဒါပေမယ့်သူလည်း အိမ်ထောင်သည်ပဲလေ….သည်လောက်တော့ သူလည်းအကွက်မြင်မှာပေါ့ မခင်စိန်ကအကျီလှန်တင်လိုက်တော့ သူ့နို့ထွားထွားကြီးနှစ်လုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့အပြင်ကိုရုန်းထွက်လာကြတယ် ခုနကကလေး ကစို့ထားတော့ နို့သီးခေါင်းမဲမဲလေးတွေမှာ အရည်လေးတွေစိုနေတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲမှာတော့ ကောက်စို့ပစ်လိုက် ချင်ပေမယ့်စိတ်ကိုမနည်းပြန်လျှော့ပြီးရေညစ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် တကယ်ကသက်သက်မဲ့ သူ့နို့ကိုင်ချင်လို့ဂွင်ဆင်လိုက်တာပါ အဝတ်လေးနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွတ်ပေးနေရင်း ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းဆက်ကနဲ့အားတဲ့လက်နဲ့ကိုင်လိုက်တော့ မခင်စိန် တစ်ချက်တွန့်သွားတယ်။
ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကို မကြည့်ပဲမျက်နှာလွှဲသွားတယ် သည်တော့ ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးဖြေးဖြေးနဲ့မှန်မှန်လေးပွတ်ပေးနေရင်း သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမယ်သူက မျက်လုံးလေးစဉ်းပြီးဇိမ်ခံနေတာဗျ ကျွန်တော်လည်းနောက်တဆင့်တက်တဲ့အနေနဲ့အဝတ်ကိုရေထဲချပြီးသူ့နို့ကိုခြောက်တဲ့အဝတ်နဲ့သုတ်ပေးလိုက်တယ် အဝတ်ခံထားတော့အားရပါးရနယ်ပေးသလိုပုံစံမျိုးနဲ့သုတ်ပေးလို့ရတယ်ဗျ အာ့…..အ့…အ့… မခင်စိန်ဆီကမျက်လုံးပိတ်ထားရင်းထွက်လာတဲ့ညီးသံပါ ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့တွေရေစင်ပြီးခြောက်သွားတော့ အဝတ်ကိုချပြီးသည်တိုင်းလက်နဲ့လိုက်နယ်ပေးလိုက်တယ် …မခင်စိန်ကအခုထိမျက်လုံးမဖွင့်သေးတော့ ကျွန်တော်လက်နဲ့သည်တိုင်းနယ်နေတာမသိသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် အထိအတွေ့ကိုတော့သူခံစားမိမှာပါ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်တွေကသူ့နို့ထွားထွားကိုပထမဖြေးဖြေးကနေနောက်ပိုင်းပိုပြီးမြန်လာအောင်ကစားလာတော့ မခင်စိန်မျက်လုံးပွင့်သွားပါတော့တယ် သြော်….အ့…အ.့မောင်လေး…. လုပ်ပေးတာပြီးပြီလား…ဟင်း… မခင်စိန်မေးတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်နဲ့နယ်နေတာကိုခနရပ်ပြီးရုတ်တရက်ကြီးသူ့နို့တွေကိုငုံ့စို့ပေးလိုက်တယ် အို.အမေ့……….အင်း….ဟင်း…..မောင်လေးရယ်….. ဘာမပြောညာမပြောဆိုတော့ မခင်စိန်ပထမလန့်သွားတာပေါ့ ဒါပေမယ့်မတားတော့ပါဘူး ကျွန်တော့်လျှာက သူ့နို့ရည်တွေကို အရသာခံစို့ရင်း လက်တစ်ကဖက်နဲ့ ကျန်တဲ့သူ့နို့ကြီးကိုနယ်လိုက် နို့တံလေးကို ကလိ ပေးလိုက်လုပ်နေတော့မခင်စိန် တော်တော်ကောင်းလာတယ်ထင်တယ်ဗျ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကိုဖွပေးရင်း ညီးနေတော့တာပေါ့ ခနကြာတော့စို့တာရပ်ပြီး မခင်စိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မခင်စိန်က ကျွန်တော့် အကြည့်ကိုလွှဲပြီး နို့တွေပြန်ဖုံးလိုက်ရင်းထိုင်နေရာက ထသွားတယ်။
သလောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းသိလိုက်ပြီလေ သည်အချိန်မလူပ်ရှားရင် ဘယ်အချိန် သွားလူပ်ရှား ရမလဲ ဟုတ်တယ်မလား ဒါနဲ့သူ့နောက်ကို ထလိုက်သွားတာပေါ ဘွားတော်က မီးဖိုချောင်ထဲဝင်သွားတာဗျဒါ နဲ့ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုမှီအောင်လိုက်ပြီး နောက်ကနေအားနဲ့သိုင်းဖက်လိုက်တယ် ရုတ်တရက်ဖက်လိုက်တော့ အမေ့………ဟင်…ငါ့မောင်….ငါ့မောင် …..ဘာလုပ်တာလဲကွယ်အစ်မကို…..ဟင် မခင်စိန်စကားကိုအာရုံမထာထားတေ့ာပဲကျွန်တော် လည်းသူ့လည်ပင်းနောက်တွေကိုနမ်းရှုံ့ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့နောက်ကနေသိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်နဲ့နိုကြီးတွေကိုနယ်ပေးလိုက်တော့ မခင်စိန်ဆီက ငြီးသံထွက်လာတယ် အ့…အ့…..အ့…..ငါ့မောင်ရယ်မသင့်တော်ပါဘူး… လွှတ်ပါ….ငါ့မောင်ရယ်…..ငါ့မောင်ရယ် လွှတ်…..လွှတ်ပါကွာ….အစ်မကအိမ်ထောင်သည်ကလေးအမေပါ ကွာ…….အ့…အ့…လွှတ်… မခင်စိန်ကလွှတ်သာလွှတ်ခိုင်းတာ တာဝန်အရ ဆိုသလိုပါပဲ စိတ်ထဲသူလည်းတော်တော်လေး ထန်နေပါပြီ သူ့လက်ကလေးနဲ့သူ့နို့တွေကိုအားရပါးရ နယ်နေတဲ့ကျွန်တော့်လက်ကိုကိုင်ထားရုံက လွဲပြီးရုန်းတောင်မရုန်းပါဘူး ဘာဖြစ်လဲ….မခင်စိန်ရာ…မခင်စိန်ကို ကျွန်တော် ချစ်နေတာကြာပြီ……ကျွန်တော်အရမ်းချစ်လို့ပါ မခင်စိန်ပါသာကလေးရှိရှိဘာရှိရှိဗျာ…ချစ်တာပဲသိတယ် ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုအားပါးတရနယ်းပေးနေရာ ကနေ တော်ကီနဲ့ချုပ်ရတာပေါ့ သည်အခြေနေမှာ နောက်ပြန်လှည့်တဲ့ကောင်ကစောက်ရူးပဲလေ မသင့်တော်ပါဘူး…ငါ့မောင်ရယ်…ပတ်ဝန်းကျင် ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်လဲ….. အစ်မကိုချစ်တာ ဘယ်သူ့စောက်ဂရုစိုက်ရဦးမလဲ….ချစ်တာပဲသိတယ်ဗျာ…..အစ်မလင်လည်းစောက်ဂရုမစိုက်ဘူး အစ်မကျွန်တော့်ကိုမချစ်ဖူးလား…အစ်မစိတ် ချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ထားပေးနိုင်တယ်နော်…. ။
အစ်မကျေနပ်ရစေမယ်ဗျာ. ကျွန်တော်လည်းသူ့အညှာကိုကိုင်ပြီး တော်တော်ဖြစ်ပြလိုက်တော့မခင်စိန် ပြုံးသွားတယ် ကဲ.. လွှတ်ပါ…..ကွာ ခနလေးလွှတ်ပါ အစ်မအသက် ရှုကြပ်လို့ပါ….အစ်မလည်းငါ့မောင်ကိုချစ်ပါတယ် ခနလွှတ်ပေးနော် အခန်းထဲသွားမယ်လေနော်…..လွှတ်ပေးနော် ကဲတွေ့တယ်မလား သည်စော်ငတ်နေတာကြာပါပြီလို့ ကျွန်တော်ကသူပြောတာနားမထောင်ပါဘူး သူ့ခန္ဓာကိုကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ပန်ကန်းဆေးတဲ့ ဘေစင်ပေါ်လက်ထောက်ခိုင်းပြီး အစ်မသည်ဘောင်ကိုကိုင်ထားပေးဗျာ …..မောင်လေးကိုချစ်ရင်နော်….အစ်မနော်……. မခင်စိန်က မောင်လေးအထဲသွားမယ်လေ သည်မှာက မီးဖိုချောင်ကြီး မီးဖိုချောင်ထဲအရင်ချစ်ချင်လို့ပါဗျာ…. နော် မခင်စိန်ခေါင်းညိတ်လိုက်တော့ အင်း….သည်လိုလေးခနကုန်းထားပေးကွာ…ချစ်တယ် အစ်မလည်းငါ့မောင်ကိုချစ်ပါတယ် သည်ကိစ္စကို ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့ ဟုတ်အစ်မ မခင်စိန်ကို ကတိပေးပြီးကျွန်တော်လည်းဘာင်းဘီချွတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးချွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး တစ်ခုခုဆို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ခြေထောက်မှာစုထားတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်း ကုန်းထားတဲ့မခင်စိန်ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဖီးလ်တက်လာတာနဲ့ ထမီလှန်တင်လိုက်တယ် ဖွေးဥနေတဲ့တင်ပါးသားကြီးတွေမမြင်ရသေးဘူး အတွင်းခံအနီကြီးကခံနေသေးတော့ ဟာရှီးပဲ ကျွန်တော်လည်းမခင်စိန်အတွင်းခံကိုထပ်ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ဖြူဖွေးပြီးပြစ်ရာမရှိလုံးဝန်းတဲ့ဖင်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရတော့တယ် ကျွန်တော်လည်းမခင်စိန်ကိုမလိုးခင် ဖင်ကိုတစ်ချက်ကုန်းနမ်းရင်းနောက်ကိုပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလျှာနဲ့ထိုးကလိပေးလိုက်တော့ အမေ့…….အ့….အ့….့အ့ ဆိုပြီးမခင်စိန်ဆီကအော်သံနဲ့ညီးသံရောပြီး ထွက်လာတယ် ပြွတ်….ပြွတ်….ရွှပ်…ရွှပ်….ပလပ်… ပလပ်…..ပလပ် ကျွန်တော်လည်း စောက်စိနဲ့အတွင်းသားဘေးသားတွေအကုန်လုံးကို ခွေးလျက်သလို လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ လျက်ပေးနေတာဆိုတာ့ဖင်ကုန်းထားတဲ့ မခင်စိန်လည်း ကောင်းလွန်းလို့ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ဘဲ ကော့တက်နေတာ ပေါ့။
တော်တော်ကြာကြာယက်ပေးပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်းလိုးဖို့အချိန်တန်ပြီထင်လို့ထိုင်နေရာ ကထ ပြီးမခင်စိန်နောက်မှာ အကျအနေရာယူလိုက်တယ် ပြီးတော့ ပြူထွက်နေတဲ့ မခင်စိန် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ လီးကို ဖြေးဖြေးချင်းထည့်ရင်းခါးကိုကိုင်ပြီးတစ်ချက် ကိုင်ဆာင့်ပေးလိုက်တယ် ဗွတ်….. အမေ့……ဖြေးဖြေးလိုးပေးပါမောင်လေး……. ဟုတ်…အစ်မ မခင်စိန်စကားအတိုင်းကျွန်တော်လည်းစစချင်းမှာတော့လီးအဝင်အထွက်မြင်ရတဲ့အရှိန်နဲ့ပဲ ခါးကိုကိုင်ရင်းဖြေးဖြေးချင်း လိုးပေးနေလိုက်တယ် ကျွန်တော်လည်းဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်လိုးပေးနေရာကနေ အရှိန်ရလာတော့ကုန်းထားတဲ့ မခင်စိန်ကိုသူအပေါ်ပိုင်း ဝတ်ထားတဲ့အကျီအကြပ်နဲ့ဘောလီကို လည်ပင်းအထိလှန်တင်ပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့လျှံထွက်နေတဲ့ မခင်စိန်ရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်ရင်း နောက်ကနေအားပါးတရ ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးတော့တာပေါ့ ဖွတ်….ဖွတ်…..ဖွတ်…..ဗြုတ်…ဖြွုတ်….. အ့………ရှီး….အ့…..အ့..ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကွာ……အ့….အ့…ရှီး….အစ်မရယ် အစ်မစောက်ဖုတ်ကြီးက အထဲကဆွဲထားသလိုပါပဲ…..အ့…အ့…..ရှီး..လီးပဲ…. အ့…အား….ဟမ်…အ့….ဆောင့်…ဆောင့်မောင်လေးဆောင့်……..နာနာလေးဆောင့်ပေး…..အင်း…ဟုတ်တယ်….အဲ့တိုင်းဆောင့်…….ဆောင့်…..ဆောင့်. အ့…..့…အ့…… မခင်စိန်ကလည်း အခုမှ ကာမအရသာကိုပြန်ခံစားရတာကြောင့် ကျွန်တော်လိုးတာကို အားရပါးရ ခံရင်း အောက်ကနေအသံပေါင်းစုံနဲ့ညီးနေတာပေါ့ သည်လိုနဲ့ မီးဖိုချောင်ခန်းထဲမှာ ရေစင်ေ ဘောင်ကိုကိုင်ရင်းလေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ မခင်စိန်ကို နောက်ကနေ ခွေးလိုးလိုးပေးရင်းကျွန်တော်လည်းသူ့နို့တွေကိုင်လိုက် ခါးကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုကိုင်ဆောင့်လိုက်နဲ့ကောင်းနေသလို သူကလည်းအောက်ကနေသူဖင်ကြီးနဲ့တင်းခံပေးထားတယ်ဗျ လူသာပိန်တာ ဖင်ကြီးကလုံးပြီးကားထွက်နေတော့ အဲ့ဖင်ကိုကြည့်လိုးနေရတာကိုကတကယ့်အရသာပါ။
ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးဆံပင်တွေကိုပါဆွဲပြီးလိုးဆောင့်ပေးတော့ အောက်ကနေမခင်စိန်က ညီးသံမျိးစုံ နဲ့ တင်းခံပေးနေပါတယ် အာ့….ဖွတ်…အာ့…အာ့….. ဆောင့်…..ဆောင့်…..အာ…..အာ့……အ့ရှီး…..ရှီး ဆောင့်ပါမောင်လေးရယ်…..ဆောင့်….လိုးလိုး….လိုး.မောင်လေးလိုး….အ….အမေ့……လိုး….မောင်လေး….အ့..အ့..အစ်မပြီးပြီ…. အ့…..အ့ ဘယ်နှစ်ကြောင်းလောက်မခင်စိန်ပြီးနေလည်းမသိပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ချီပြီးချင်လာပါပြီ အ…..ဖွတ်ဖွတ်…..ဖွတ်….ဖွတ်….ရှီးပဲ….ကောင်းလိုက်တာကွာ…..အ့….အစ်မကောင်း..လား…အာ့….. ကောင်းလား………. အ….အ့…..ရှစ်…ဟမ်း…..ဟမ်း… ဟမ်း………အ့……ရှီး…ပြီးပြီ…..အ့….အ့….အ့……. နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ကာမပန်းတိုင်ကို ညီးသံမျိုးစုံးပေးရင်းရောက်သွားခဲ့တာပေါ့ ကိစ္စပြီးတော့မခင်စိန်လည်းထမီကိုပြန်ဝတ်ရင်း နို့တွေကိုဘော်လီထဲပြန်ထည့်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ရင်း မောင်လေး သည်ညအဝလိုးပေးကွာ….အိမ်မပြန် နဲ့ရလား…..အစ်မမောင်လေးလီးကြီးကို အရမ်းချစ်သွားပြီ…… အစ်မကိုမောင်လေးအဝ လိုးပေးပါကွာနော်…….အစ်မတို့ပျော်ကြမယ်လေ ကျွန်တော်လည်းခေါင်းညိတ်ပြပြီး အပြင်ခနထွက်ခဲ့လိုက်တယ် မခင်စိန်လည်းသူ့လင်အတွက် စားစရာလုပ်ပေးဦးမယ်ဆိုပြီးမီးဖိုချောင်ထဲကျန်ခဲ့တယ် ကျွန်တော်လည်းအိပ်ထဲက ဖုန်းယူပြီး ဘွားတော်ဆီသည်ညပြန်မအိပ်ဖြစ်တဲ့ ကြောင်း Message ပြန်ပို့ရင်း မီးဖိုချောင်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့တယ် ဘွားတော်တော့ပြန်မအိပ်လို့တင်းနေတော့မှာပဲ မတက်နိုင်ဘူးဗျာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မခင်စိန်က သူ့လင်အတွက်ဆန်ပြုတ်လုပ်နေတာဗျ မခင်စိန်က မောင်လေးအစ်မအခန်းထဲဝင်နေလေ ….. ဟင်….အစ်ကိုနဲ့အစ်မတစ်ခန်းထဲအတူမနေဖူးလား….. အရင်ကတစ်ခန်းထဲပဲသူ့ကုတင်ဘေးအိပ်တာ ကလေးတွေကသက်သက်အိပ်တာ အခုကလေးတွေကိုသူတို့အဖေနဲ့သွားသိပ် ရတော့မှာပေါ့…. ဟုတ်လား သည်ညတော့ အဲ့ဘဲကြီးခေါက်ထားလိုက်ပါဗျာ …. အင်းပါ….မောင်လေး.အခု….သွားနားသွား…. ကျွန်တော်လည်းမခင်စိန်အခန်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်ရင်း ကုတင်ပေါ်သွားလှဲနေလိုက်ရင်းတမှေးလောက် အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့ အိပ်နေရင်းအောက်ပိုင်းကစိုစို….စိုစိုနဲ့ဖြစ်လာလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မခင်စိန်ဗျ မခင်စိန်က အပေါ်ပိုင်းအဝတ်အစားမရှိတော့ဘူး။
အောက်မှာလည်းထမီလေးပဲရှိတော့တယ် မခင်စိန်က ကျွန်တော့်လီးကိုအားပါးတရငုံ့စုပ်ပေးနေရင်းကျွန်တော်နိုးသွားလို့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူကပြုံးပြတယ် ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်ပေးနေတာ ရပ်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော့်အပေါ်တက်ထိုင်ခိုင်းတယ် မခင်စိန်က ကျင်လည်စွာနဲ့ကျွန်တော့်လီးပေါ်ထိုင်ချပြီး ထိုင်ဆောင့်တော့တာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းအောက်ကနေ မခင်စိန်ခါးဗိုက်သားကိုကိုင်ရင်းကော့ကော့ပြီးဆောင့်ပေးနေသလို မခင်စိန်ကလည်း သူ့နို့ကြီးတွေလူပ်ရမ်းပြီး ခံနေတာဗျ တကယ့်ကို ဖီးလ်ပဲဗျာ မခင်စိန်ကဘောဒီလှသလို နို့ကြီးတော့ အောက်ကနေ မခင်စိန်နို့တွေကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်ပေးနေမိတာပေါ့ မခင်စိန်ကလည်း သူနို့ တွေကိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော့်လက်ကို ပြန်ကိုင်ရင်း အရသာကိုခံစားနေတာပေါ့ သူ့ခင်ဗျာလည်းငတ် နေတာကြာပြီလေ မခင်စိန်နဲ့အပေးယူယူမျှမျှလိုးနေရင်းကနေ အောက်ကနေပြီးကျွန်တော်က အ…..အ့….အာ့….. ဟမ်း….အမ်း….အာ…. အစ်မကောင်းရဲ့လားဗျာ….အစ်မကောင်းလား….. မောင်လေးလိုးပေးတာ…ကောင်းလား….. အ့……ဖွတ်ဖွတ်…..ဖွတ်….ကောင်းလား..ဆိုပြီး မေးနေမိသလို ကောင်းလိုက်မောင်လေးရာ….အစ်မ….ယောကျာ်းထက်ပိုကောင်းတယ်မောင်လေးက….အ့….အ့.. မောင်လေးနဲ့ သည်တစ်ညလုံးအဝလိုးကြမယ်….လိုး…လိုး…….အ့….အ့ အစ်မ…..ဖင်ကြီးပါလိုးချင်တယ်ဗျာ…..အ့….အာ့…. အစ်မကိုမှန်းနေခဲ့ရတာကြာပြီ…..အာ့….ရှီး ကောင်းလိုက်တာ……..အ့…အ့…. ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့နို့ကြီးတွေစို့ပေးရင်း သူ့ကိုကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်တင်ဆောင့်လိုးတော့တာပါပဲ အချက်နှစ်ဆယ်လောက်အားပါးတရဆောင့်လိုးပေးပြီး တဲ့အချိန်မှာတော့ သူရောကျွန်တော်ရော ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေပါတော့တယ် သူလည်းဘယ်နှစ်ကြောင်းလောက်ပြီးမှန်းမသိအောင်ကောင်းနေသလို ကျွန်တော့် လိုးအားကိုလည်း သဘောကျနေတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်လည်းပုံစံပြောင်းလိုးချင်လာတာနဲ့ ခနလေး….အစ်မအိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်….ပါလား ကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တော့မခင်စိန်ကခေါင်းညိတ်ပြပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ကခွာရင်းအိပ်ရာပေါ်ပက်လက်လှဲလိုက်တယ် ကျွန်တော်က သူ့ရင်ဘက်ပေါ်ခွပြီး သူ့နို့တွေကြားထဲလီးကိုထည့်လိုးမလို့ပါ ဒါကို မခင်စိန်ကအလိုက်တသိနဲ့ သူနို့နှစ်လုံးကို လက်နဲ့ကိုင်ညစ်ပြီးကျွန်တော့်လီးကြီးကိုအပေါ်အောက်ပွတ်ပေးတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းကုတင်စွန်းကိုကိုင်ရင်း မခင်စိန်နို့ကြီးတွေကြားထဲ စိတ်ကြိုက်လိုးပေးနေမိတာလီးကရှည်တော့ မခင်စိန်ပါးစပ်အထိရောက်လို့မခင်စိန်ကလျှာနဲ့ပါကစားပေးနေသေး…. ဟုတ်တယ်….ဟုတ်တယ်….အဲ့လိုလေး…လျက်ပေး…အ့ ကောင်းလိုက်တာ….အ့..အမ်း…….အာ့..ရှီး….ရှီး… အ့ ကောင်းလိုက်တာ…အစ်မခင်စိန်ရာ….ရပြီရပြီ လိုးချင်နေပြီ……..အစ်မစောက်ဖုတ်ကိုလိုးချင်နေပြီ ကျွန်တော်လည်းသူ့အပေါ်ကထပြီး သူ့ပေါင်ကြားထဲက စောက်ဖုတ်ကြီးကို လျှာနဲ့ ငုံ့ လျက်ပေးလိုက်တယ် မခင်စိန်ကပေါင်နှစ်ဖက်ကားထားပေးပြီး လျှာနဲ့အားပါးတရလျက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော့်ကို ဆံပင်တွေလှမ်းဆွဲရင်း ပါးစပ်ကလည်း အ့….မောင်လေးရယ်….အ့…အစ်မသေအောင်လုပ်နေတာ…လား…အ့….ချစ်လိုက်တာမောင်လေးရာ….. အစ်မကိုလိုးပါတော့…..မမကိုလိုးပါတော့ကွာ…. မောင်လေးလီးမည်းမည်းကြီးနဲ့တဆုံးလိုးပါတော့ကွာ…..အ့….အ့… ဆိုပြီးငြီးနေတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်း လျှာနဲ့အသံမြည်အောင်လျက်ပေး နေမိတော့ မခင်စိန်စောက်ရည်တွေနဲ့ ခုနက ကျွန်တော် လီးဝင်ထားတဲ့အရည်တွေရောပြီး ရွှဲနေတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်လည်း သည်လောက်ရွှဲနေတဲ့ပုံစံဆိုရပြီ ဆိုပြီး သူ့ပေါင်ကြားထဲဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လီးကိုစသွင်းလိုက်တယ် အ့. မခင်စိန်ဆီကထွက်လာတဲ့အသံ သူ့ကိုဂရုမစိုက်နေတော့ပဲ သူပေါင်နှစ်လုံးကိုကိုင် ရင်း လီးကို စောက်ဖုတ်ထဲ ချောချောချူချူဝင်အောင် အရင်လုပ်တယ် ဒါပေမယ့် လီးတစ်ခုလုံးကိုတော့အဆုံးအထိမသွင်းသေးဘဲ လက်တစ်လုံးလောက်အပြင်မှာချန်ထားပြီးဖြေးဖြေးမှန်မှန်လိုးပေးနေလိုက်တယ်။
အစ်မကိုအမြဲလာလိုးချင်တယ်ဗျာ….ခွင်ု့ပြနိုင်မလား အစ်မ…..ဟမ်…..အစ်မစောက်ဖုတ်ကြီးကစီးလိုက်တာ….အ့….အ့…ကောင်းလိုက်တာ…..အ့ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ် ( ဒါကမိန်းမတိုင်းကိုပြောတဲ့စကားပါ)အစ်မလင်ဂီလာနထက်သာအောင်မောင်လေး အခု လိုးပေးနေတယ် ….ကောင်းလားအစ်မ…. ကျွန်တော်က လီးကိုအထုပ်အသွင်းလုပ်ရင်း မေးတော့ မခင်စိန်က မျက်စိမှိတ်အရသာခံနေရင်းကနေ ကောင်းတယ်မောင်လေး….အ့…မမကိုလိုးကွာ…..အ….အ့.. .များများ…လိုးပေးပါကွာ…..နော်.တဲ့ ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုယ်ပေါ်မှောက်ချလိုက်ရင်း သူ့ကိုမျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ် အစ်မကို ချစ်တယ်ဗျာ….. မမလည်းမောင့်ကိုချစ်တယ် မောင်တဲ့လား…..မရာ… မ…… အင်း….. မ….. ကောင်းလား…. အင်း…ကောင်းတယ်…. ချစ်လား….. ချစ်တယ် ….. လိုးကြာ …. အင်းလိုးနေပြီ…. အ့….အ့.. ကျွန်တော်လည်းသူကိုယ်ပေါ်မှောက်ချရင်းသူနဲ့ ကစ်ဆင်တွေဆွဲနို့တွေ့စို့ရင်းအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံး အရသာခံတာပေါ့ အခုမှပဲသူ့ကိုကုတင်ပေါ်မှာ ကိုရီးယားဟက်ကားတွေလို အရသာခံရတာပေါ့ အောက်ကလည်းလီးကမော်တာစက်လိုအဆက်မပြက် စောက်ဖုတ်ထဲဝင်နေတော့ မခင်စိန်လည်း တော်တော်အကြိုက်တွေ့နေပါတယ် လင်နဲ့မနေရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မခင်စိန်တစ်ယောက်သူ့နို့တွေကိုင်ရင်းအားပါးတရဆောင်နေ့လိုးနေတဲ့ ကျွန်တေ့ာ်ရဲ့လီးချက်တွေအောက်မှာ သာယာနေမှာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ ခနနေတော့ကျွန်တော်လည်းမခင်စိန်တစ်ကိုယ်လုံးကို နယ်ဖက်နမ်းရှုံရင်းလှေကြီးထိုးထိုးရိုးရိုးကြီးလိုးနေရာကနေထပြီး အားရှိပါးရှိဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်ပေါလေတော့တယ်…ပြီး။